Ahoana ny fomba hijerena ny fandrarana ny dia, ny didy fisamborana ary ny raharaha heloka bevava | Orinasa Mpampanoa lalàna
Ahoana ny fijerena ny fandrarana ny dia, ny didy fisamborana ary ny raharaha heloka bevava
Te any UAE ve ianao?
Ny Emirà Arabo Mitambatra (UAE) dia firenena any amin'ny ilany atsinanan'ny Saikinosy Arabo. Ny Emira Arabo Mitambatra dia ahitana emirat fito: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah ary Umm al-Quwain.
Mandeha any Dubai na UAE?
Mety manana fandrarana fitsangatsanganana na raharaha heloka bevava ianao
Dubai no toeram-pizahan-tany malaza indrindra
UAE na Dubai dia iray amin'ireo toerana fizahan-tany malaza indrindra eran'izao tontolo izao, ary, amin'ny farany, iray amin'ireo toerana tsara indrindra hipetrahana. Ho an'ireo mpila ravinahitra sy olom-pirenena Emirà Arabo Mitambatra, ny governemanta dia manome tombontsoa sy tombontsoa betsaka, anisan'izany ny fikarakarana ara-pahasalamana, sakafo, fananana freehold, fanabeazana ary visa volamena.
Emira Arabo Mitambatra/Dubai Fandrarana ny Dia
Ny fandraràna fitsangatsanganana any UAE dia afaka manakana ny olona tsy hiditra sy hiditra ao amin'ny firenena na hivezivezy any ivelan'ny firenena mandra-pahafeno ny fepetra manokana.
Inona avy ireo antony hamoahana fandrarana fitsangatsanganana any Dubai na UAE?
Ny fandraràna dia mety havoaka noho ny antony maromaro, ao anatin'izany:
Famonoana trosa tsy voaloa
Ny tsy fahatongavana eny amin’ny fitsarana
Raharaha heloka bevava na fanadihadiana mitohy momba ny heloka bevava
Ady amin'ny fanofana
Ny fanitsakitsahana ny lalànan'ny fifindra-monina toy ny fijanonana mihoatra ny visa
Fanitsakitsahana ny lalàna momba ny asa toy ny miasa tsy misy fahazoan-dàlana na miala ny firenena alohan'ny hanomezana filazana ny mpampiasa sy ny fanafoanana ny fahazoan-dàlana
Ny fihanaky ny aretina
Iza no voarara tsy hiditra any UAE?
Voarara tsy hiditra any UAE ireto olona manaraka ireto:
Olona manana firaketana heloka bevava any amin'ny firenena rehetra
Olona voaroaka avy any UAE na firenena hafa
olona tadiavin'ny Interpol manao heloka bevava ivelan'ny Emira Arabo Mitambatra
Mpanondrana olona an-tsokosoko
Olona tafiditra amin'ny asa fampihorohoroana na vondrona
Mpikambana amin'ny heloka bevava voarindra
Na iza na iza heverin'ny governemanta ho loza mitatao ho an'ny filaminana
Olona manana aretina mampidi-doza amin'ny fahasalamam-bahoaka, toy ny VIH/SIDA, SARS, na Ebola
Iza no voarara tsy hiala ao UAE?
Voarara tsy hiala ao Emirà Arabo Mitambatra ireto vondrona vahiny ireto:
Olona manana trosa tsy voaloa na adidy ara-bola (Raharaha Active Execution)
Voampanga amin'ny raharaha heloka bevava
Olona nodidian’ny fitsarana hijanona eto an-tanindrazana
Olona iharan'ny fandraràn'ny mpampanoa lalàna na manampahefana mahefa hafa
Tsy ampy taona izay tsy miaraka amin'ny mpiambina
Ahoana ny fomba hijerena ny fandrarana ny dia any UAE?
Misy fomba maro hijerena ny fandrarana ny dia.
⮚ Dubai, Emirà Arabo Mitambatra
Ny polisy Dubai dia manana serivisy an-tserasera izay ahafahan'ny mponina sy ny olom-pirenena mijery ny fandrarana (kitiho eto). Misy amin'ny teny anglisy sy arabo ny serivisy. Raha hampiasa ny serivisy ianao dia mila mampiditra ny anaranao feno, ny nomeraon'ny ID Emirates ary ny daty nahaterahanao. Haseho ny valiny.
⮚ Abu Dhabi, Emirà Arabo Mitambatra
Ny departemantan'ny fitsarana ao Abu Dhabi dia manana serivisy an-tserasera antsoina hoe Estafser izay ahafahan'ny mponina sy ny olom-pirenena mijery ny fandraràna ny fivezivezena ho an'ny daholobe. Ny serivisy dia misy amin'ny teny anglisy sy arabo. Mila mampiditra ny nomeraon'ny ID Emirates anao ianao raha te hampiasa ny serivisy. Hasehon'ny valiny raha misy fandrarana fitsangatsanganana aminao.
⮚ Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Fujairah ary Umm Al Quwain
Raha te hanamarina ny fandrarana fitsangatsanganana any Sharjah, tsidiho ny tranonkala ofisialin'ny polisy Sharjah (eto). Mila mampiditra ny anaranao feno sy ny laharana ID Emirates ianao.
Raha ao anaty ianao Ajman, Fujairah (eto), Ras Al Khaimah (eto), na Omm Al Quwain (eto), azonao atao ny mifandray amin'ny sampan-draharahan'ny polisy ao amin'io emirate io mba hanontany momba ny fandrarana ny dia.
Fanamarinana mialoha tokony hatao alohan'ny famandrihana dia mankany UAE
Afaka manao vitsivitsy ianao fisavana mialoha (tsindrio eto) mba hahazoana antoka fa tsy hisy olana rehefa mamandrika ny dianao mankany UAE ianao.
Jereo raha nisy fandrarana fitsangatsanganana navoaka taminao. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fampiasana ny serivisy an-tserasera an'ny Polisy Dubai, Departemantan'ny Fitsarana Abu Dhabi, na Polisy Sharjah (araka ny voalaza etsy ambony)
Ataovy azo antoka fa manankery mandritra ny enim-bolana farafahakeliny ny pasipaoronao manomboka amin'ny datin'ny dianao mankany UAE.
Raha tsy olom-pirenena Emirà Arabo Mitambatra ianao dia jereo ny fepetra takian'ny visa ho an'ny Emira Arabo Mitambatra ary ataovy azo antoka fa manana visa manankery ianao.
Raha mandeha miasa any UAE ianao dia jereo amin'ny mpampiasa anao mba hahazoana antoka fa ny orinasanao dia manana fahazoan-dàlana hiasa sy fankatoavan'ny Minisiteran'ny Human Resources sy Emiratisation.
Hamarino amin'ny zotram-piaramanidina misy anao raha toa ka misy fameperana amin'ny dia mankany UAE izy ireo.
Ataovy azo antoka fa manana fiantohana fitsangatsanganana feno ianao izay handrakotra anao raha misy olana rehefa any UAE ianao.
Jereo ny fampitandremana momba ny dia navoakan'ny governemantanao na ny governemanta UAE.
Tehirizo ao amin'ny toerana azo antoka ny dika mitovy amin'ireo antontan-taratasy manan-danja rehetra, toy ny pasipaoronao, visa, ary fiantohana fiantohana.
Misoratra anarana amin'ny masoivohon'ny firenenao any Emirà Arabo Mitambatra mba hahafahan'izy ireo mifandray aminao raha sendra misy hamehana.
Fantaro ny lalàna sy ny fomba amam-panao ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra mba hahafahanao misoroka olana rehefa any amin'ny firenena ianao.
Manamarina raha manana raharahan'ny polisy any Dubai, Abu Dhabi, Sharjah ary ireo Emirates hafa ianao
Na dia tsy misy rafitra an-tserasera aza ho an'ny fisavana feno sy fanaraha-maso feno ary ho an'ny emirates sasany, ny safidy azo ampiharina indrindra dia ny fanomezana fahefana mpisolovava amin'ny namana na havana akaiky na manendry mpisolovava. Raha toa ka efa any Emirà Arabo Mitambatra ianao, dia hangataka anao ho tonga manokana ny polisy. Raha tsy eto an-tanindrazana ianao, dia tsy maintsy mahazo POA (famonjena) ankatoavin'ny masoivohon'ny Emira Arabo Mitambatra. Ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny Emirà Arabo Mitambatra dia tokony hanamarina ihany koa ny dikan-teny arabo POA.
Mbola afaka manamarina tranga heloka bevava na fandrarana ny dia any UAE tsy misy id emirates izahay, azafady mba mifandraisa aminay. Antsoy izahay na WhatsApp amin'ny fanamarinana ny fandrarana fitsangatsanganana, ny didy fisamborana ary ny raharaha heloka bevava amin'ny 971506531334 + 971558018669 + (mihatra ny saran'ny serivisy USD 400)
Raha olom-pirenen'ny Emira Arabo Mitambatra ianao dia afaka mahita lisitry ny masoivoho sy kaonsilin'ny Emira Arabo Mitambatra manerana izao tontolo izao amin'ny tranonkalan’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny sy ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena.
Raha tsy olom-pirenena Emirà Arabo Mitambatra ianao dia afaka mahita lisitry ny masoivoho vahiny sy consulat any Emirà Arabo Mitambatra ao amin'ny tranokalan'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny sy ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena.
Fahazoana Visa hiditra any UAE: Inona no Visa ilainao?
Raha olom-pirenena UAE ianao dia tsy mila visa hiditra ao amin'ny firenena.
Raha tsy olom-pirenena ao UAE ianao dia mila mahazo a visa ho alohan'ny handehanana any UAE. Misy fomba maro ahazoana visa ho an'ny UAE.
Mangataha visa amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny tranokalan'ny Tale Jeneralin'ny Residency sy ny Raharaham-bahiny.
Mangataha visa any amin'ny masoivoho na consulat UAE.
Makà visa rehefa tonga any amin'ny iray amin'ireo seranam-piaramanidina ao UAE.
Mahazoa visa fidirana marobe, izay ahafahanao miditra sy mivoaka im-betsaka ao UAE mandritra ny fe-potoana iray.
Makà visa fitsidihana, izay ahafahanao mijanona ao UAE mandritra ny fe-potoana iray.
Makà visa fandraharahana, izay ahafahanao mandeha any UAE noho ny tanjona ara-barotra.
Makà visa asa, izay ahafahanao miasa any UAE.
Makà visa ho an'ny mpianatra, izay ahafahanao mianatra any UAE.
Makà visa fampitaovana, izay ahafahanao mitety an'i UAE amin'ny fitaterana.
Makà visa ho an'ny iraka, izay ahafahanao mandeha any Emirà Arabo Mitambatra noho ny raharaham-panjakana ofisialy.
Ny karazana visa ilainao dia miankina amin'ny tanjon'ny dianao mankany UAE. Azonao atao ny mahazo fampahalalana bebe kokoa momba ny karazana visa azo avy amin'ny Tale Jeneralin'ny Residency sy ny Raharaham-bahiny.
Ny maha-ara-dalàna ny visa dia miankina amin'ny karazana visa anananao sy ny firenena niavianao. Amin'ny ankapobeny, manankery mandritra ny 60 andro ny visa manomboka amin'ny daty namoahana azy, saingy mety hiovaova izany. Ny visa fitaterana 48-96 ora dia misy ho an'ireo mpandeha avy any amin'ny firenena sasany mandalo any UAE ary manankery mandritra ny 30 andro manomboka amin'ny daty famoahana.
Halaviro ny fonja: Torohevitra hiantohana ny fijanonana tsy hay hadinoina (sy ara-dalàna) ao Dubai
Tsy misy olona te handany fotoana any am-ponja, indrindra amin'ny fialan-tsasatra. Mba hisorohana ny olana ara-dalàna rehefa any Dubai ianao dia araho ireto torohevitra ireto:
Aza misotro toaka eny imasom-bahoaka. Tsy ara-dalàna ny misotro toaka eny amin'ny toerana be olona, ​​toy ny zaridainam-panjakana sy tora-pasika. Ny fisotroana toaka dia tsy azo atao afa-tsy amin'ny trano fisotroana, trano fisakafoanana ary klioba nahazoana alalana.
Aza misotro zava-mahadomelina. Tsy ara-dalàna ny mampiasa, manana, na mivarotra zava-mahadomelina any Dubai. Raha tratran’ny rongony ianao dia higadra.
Aza miloka. Tsy ara-dalàna ny filokana any Dubai, ary hosamborina ianao raha tratra miloka.
Aza manao fanehoana firaiketam-po ampahibemaso. Tsy azo atao ny PDA eny amin'ny toerana ho an'ny daholobe, toy ny zaridaina sy tora-pasika.
Aza manao akanjo fihantsiana. Zava-dehibe ny manao akanjo tsy mahazatra any Dubai. Midika izany fa tsy misy short, tank top, na akanjo miharihary.
Aza maka sary olona tsy nahazoana alalana. Raha te haka sary olona ianao dia mangataha alalana aminy aloha.
Aza maka sary ny tranom-panjakana. Tsy ara-dalàna ny maka sary ny tranom-panjakana ao Dubai.
Aza mitondra fitaovam-piadiana. Any Dubai, tsy ara-dalàna ny mitondra fitaovam-piadiana, toy ny antsy sy basy.
Aza manary fako. Voasazy amin'ny onitra any Dubai ny fandosirana fako.
Aza mitondra fiara tsy mitanila. Sazy lamandy sy am-ponja any Dubai ny fiara tsy mataho-dalana.
Amin'ny fanarahana ireo torohevitra ireo dia azonao atao ny misoroka ny olana amin'ny lalàna rehefa any Dubai ianao.
Inona no andrasana rehefa mandeha any Dubai mandritra ny Ramadany
Volana masina ho an'ny Silamo ny Ramadany, izay mifady hanina manomboka amin'ny maraina ka hatramin'ny hariva. Raha mikasa ny handeha any Dubai mandritra ny Ramadany ianao dia misy zavatra vitsivitsy tokony ho fantatrao.
Trano fisakafoanana sy trano fisotroana kafe maro no hikatona mandritra ny andro. Ny ankamaroan'ny trano fisakafoanana sy trano fisotroana kafe dia tsy hisokatra afa-tsy amin'ny alina.
Hihena ny fifamoivoizana eny an-dalana mandritra ny andro.
Ny orinasa sasany dia mety hampihena ny ora mandritra ny Ramadany.
Tokony hiakanjo amin'ny fomba mahazatra ianao ary tsy hanao akanjo mibaribary.
Tokony hanaja ny olona mifady hanina ianao.
Mety ho hitanao fa mihidy ny toerana sasany mandritra ny Ramadany.
Mety hisy hetsika manokana sy hetsika atao mandritra ny Ramadany.
Ny Iftar, sakafo ho an'ny fialan-tsasatra, dia matetika fety.
Ny Eid al-Fitr, ny fetibe amin'ny faran'ny Ramadany, dia fotoana fankalazana.
Aza hadino ny manaja ny kolontsaina sy ny fomba amam-panao eo an-toerana rehefa mandeha any Dubai mandritra ny Ramadany.
Ny tahan'ny heloka bevava ambany any Emirà Arabo Mitambatra: Nahoana no mety ho antony ny lalàna Sharia
Ny lalàna Sharia dia rafitra ara-dalàna Islamika izay ampiasaina any UAE. Ny lalàna Sharia dia mandrakotra ny lafiny rehetra amin'ny fiainana, manomboka amin'ny lalàna momba ny fianakaviana ka hatramin'ny lalàna momba ny heloka bevava. Ny iray amin'ireo tombony amin'ny lalàna sharia dia ny nanampy tamin'ny famoronana tahan'ny heloka bevava ambany ao UAE.
Misy antony maromaro mahatonga ny lalàna sharia ho anton'ny tahan'ny heloka bevava ambany ao UAE.
Ny lalàna Sharia dia manome fiarovana amin'ny heloka bevava. Henjana ny sazy ho an'ny heloka bevava eo ambanin'ny lalàna sharia, izay manakana ny mety ho mpanao heloka bevava.
Haingana sy azo antoka ny lalàna Sharia. Eo ambanin'ny lalàna sharia dia tsy misy fahatarana ny tsy rariny. Rehefa vita ny heloka bevava dia tanterahina haingana ny sazy.
Ny lalàna Sharia dia mifototra amin'ny fisakanana fa tsy amin'ny fanarenana. Ny fisorohana ny heloka bevava no ifantohan'ny lalàna sharia fa tsy ny fanarenana ny jiolahy.
Ny lalàna Sharia dia fepetra fisorohana. Amin'ny fanarahana ny lalàna sharia, ny olona dia mora kokoa ny manao heloka bevava amin'ny voalohany.
Ny lalàna Sharia dia misakana ny famerenana indray. Henjana tokoa ny sazy araka ny lalàna sharia ka tsy dia mety ho diso indray ny mpanao heloka bevava.
Coronavirus (COVID-19) sy ny dia
Ny fihanaky ny coronavirus (COVID-19) dia nahatonga firenena maro nametraka fameperana ny dia. Ny fepetra takian'ny Covid-19 ho an'ireo mpandeha mankany UAE dia napetraky ny governemanta UAE.
Ny mpandeha rehetra mankany UAE dia tsy maintsy manana valin'ny fitsapana Covid-19 ratsy.
Ny mpandeha dia tsy maintsy mampiseho ny valin'ny fitsapana Covid-19 ratsy rehefa tonga any UAE.
Ny mpandeha dia tsy maintsy manolotra taratasy fanamarinana ara-pitsaboana avy any amin'ny firenena niaviany izay milaza fa afaka amin'ny Covid-19 izy ireo.
Ny fanavahana ny fepetra takiana amin'ny fitiliana PCR dia azo atao ho an'ireo mpandeha izay vita vaksiny Covid-19.
Ny ady amin'ny fitazonana, ny hofan-trano ary ny trosa tsy voaloa dia mety handrara ny dia
Misy maromaro antony mahatonga ny olona iray ho voarara tsy handeha. Ny antony mahazatra sasany amin'ny fandrarana dia:
Ady amin'ny fitazonana: Mba hisakanana anao tsy hitondra ilay zaza any ivelany.
Rent: Mba hisakanana anao tsy hivoaka ny firenena nefa tsy mandoa hofan-trano.
trosa tsy voaloa: Mba hisakanana anao tsy hivoaka ny firenena tsy handoa ny trosanao.
Firaketana heloka bevava: Mba hisorohana anao tsy hivoaka ny firenena sy hanao heloka bevava hafa.
Visa Overstay: Mety ho voarara tsy hivezivezy ianao raha nijanona mihoatra ny visa.
Raha mikasa ny handeha any UAE ianao dia ataovy izay hahazoana antoka fa tsy voarara tsy handeha ianao. Raha tsy izany dia mety tsy ho afaka hiditra ao amin'ny firenena ianao.
Nandefa fampindramam-bola aho: Afaka miverina any UAE ve aho?
Ny didim-panjakana federaly laharana faha-14 amin'ny taona 2020 momba ny famahana ny trosa, ny fanitsiana ny fehezan-dalàna famaizana ary ny fampidirana ireo fepetra vaovao dia milaza fa izay olona tsy nindram-bola dia voarara tsy handeha. Tafiditra ao anatin'izany ny olona rehetra tsy nandoa ny trosan'ny fiara, ny fampindramam-bola manokana, ny trosan'ny carte de crédit, na ny fampindramam-bola.
Raha nindram-bola ianao dia tsy afaka miverina any UAE. Tsy ho afaka hiverina any UAE ianao rehefa voaloa tanteraka ny trosanao.
Inona no tokony ho fantatrao momba ny lalàna vaovao momba ny fanamarinana Bounced ao UAE
Nihevitra ny Emira Arabo Mitambatra ho 'asa mpanatanteraka'.
Nanomboka tamin'ny Janoary 2022, tsy hoheverina ho heloka bevava intsony ny tseky mitsambikina any UAE. Tsy voatery hiakatra eny amin’ny fitsarana ny tompon’ny raharaha, satria ny taratasim-bola natsilony dia ho raisina ho ‘acte executive’.
Na izany aza, raha te handray fepetra ara-dalàna ny tompon'ny seky, dia mbola afaka miakatra eny amin'ny fitsarana izy ireo, manolotra ny seky mitsambikina ary mitaky onitra.
Misy zavatra vitsivitsy tokony hotadidinao raha mikasa ny hanoratra seky any UAE ianao:
Ataovy azo antoka fa manana vola ampy ao amin'ny kaontinao ianao handrakofana ny sandan'ny seky.
Ataovy azo antoka fa olona atokisanao ny mpandray ny seky.
Ataovy azo antoka fa feno sy voasonia tsara ilay seky.
Tehirizo ny dika mitovy amin'ny taratasim-bola raha toa ka mitsoka.
Amin'ny fanarahana ireo toro-hevitra ireo dia azonao atao ny misoroka ny fisamborana ny taratasinao ary voarara tsy handeha.
Mikasa ny handao ny UAE ve ianao? Ahoana no hijerena tena raha manana fandrarana ny dia ianao
Raha mikasa ny handao ny UAE ianao dia zava-dehibe ny manamarina raha manana fandrarana ny dia ianao. Misy fomba maromaro hijerena raha manana fandrarana dia:
Jereo amin'ny mpampiasa anao
Jereo amin'ny biraon'ny polisy eo an-toerana
Jereo amin'ny masoivohon'i UAE
Zahao amin'ny Internet
Hamarino amin'ny mpandraharaha fitsangatsanganana anao
Raha manana fandrarana dia tsy afaka mivoaka ny firenena ianao. Mety hosamborina ianao ary haverina any UAE raha manandrana miala ianao.
UAE Travel Ban sy Arrest Warrant Check serivisy miaraka aminay
Zava-dehibe ny miara-miasa amin'ny mpisolovava iray izay hanao fisavana feno momba ny didy fampisamborana sy fandrarana fitsangatsanganana natolotra anao tany UAE. Ny pasipaoronao sy ny kopian'ny pejin'ny visa dia tsy maintsy apetraka ary ny valin'ity fanamarinana ity dia azo alaina tsy mila mitsidika manokana ireo manampahefana ao amin'ny governemanta ao UAE.
Ny mpisolovava karamainao dia hanao fisavana lalina miaraka amin'ireo manampahefana ao amin'ny governemanta Emirà Arabo Mitambatra mba hamaritana raha misy didy fampisamborana na fandrarana fitsangatsanganana napetraka aminao. Azonao atao izao ny mitahiry ny volanao sy ny fotoananao amin'ny alàlan'ny fanalavirana ny loza mety hitranga amin'ny fisamborana na ny fandavana hiala na hiditra any UAE mandritra ny dianao na raha misy fandrarana ny seranam-piaramanidina ao UAE. Ny hany ilainao dia ny mandefa ny antontan-taratasy ilaina amin'ny Internet ary afaka andro vitsivitsy dia ho azonao ny valin'io fanamarinana io amin'ny alàlan'ny mailaka avy amin'ny mpisolovava. Antsoy na WhatsApp izahay amin'ny 971506531334 + 971558018669 + (mihatra ny saran'ny serivisy USD 400)
Hamarino miaraka aminay ny serivisy fisamborana sy fandrarana - ny antontan-taratasy ilaina
Ny antontan-taratasy ilaina amin'ny fanaovana fanadihadiana na fanamarinana raharaha heloka bevava any Dubai amin'ny fandrarana dia ahitana dika mitovy miloko mazava amin'ireto manaraka ireto:
Fahazoan-dàlana amin'ny trano fonenana na pejy farany amin'ny visa
Pasipaoro efa lany daty raha toa ka asianao ny visa -n'ny trano fonenanao
Ny hajia farany farany raha misy kosa
ID Emirates raha misy manana
Azonao atao ny manararaotra an'io serivisy io raha mila mandeha mamaky, mankany, ary avy any UAE ianao ary te-hahazo antoka ianao fa tsy voatanisa.
Inona no tafiditra amin'ny serivisy?
Torohevitra ankapobeny - Raha tafiditra ao anaty lisitry ny lisitra ny anaranao dia afaka manome torohevitra amin'ny ankapobeny ireo mpisolovava momba ireo dingana ilaina hiatrehana ny toe-javatra.
Famarino feno - Ilay mpisolovava dia hanao ny fisavana miaraka amin'ireo manam-pahefana mifandraika amin'ny fahazoan-dàlana hisambotra fisamborana sy ny fandraràna fitsangatsanganana apetraka aminao any UAE.
Privacy - Ny antsipiriany manokana izay zarainao sy ny zavatra rehetra iarahanao hevitra amin'ny mpisolovava anao dia ho eo ambany fiarovana ny tombon-dahin'ilay mpisolovava-mpanjifa.
karazana verinia - Hahazo ny valin'ny kaonty ianao amin'ny mailaka avy amin'ny mpisolovava anao. Ny vokatra dia hanondro raha manana alalana / fandrarana na tsia ianao.
Inona no tsy tafiditra ao amin'ny serivisy?
Manala ny fandrarana - Ny mpisolovava dia tsy hiatrika ny andraikitry ny fanesorana ny anaranao amin'ny fisakanana na hampiakatra ny fandrarana.
Anton'ny fampiatoana / fandrarana - Ny mpisolovava dia tsy hanadihady na hanome anao vaovao feno momba ny anton'ny fampiatoana alalana anao na fandrarana raha misy.
Fanomezam-pahefana - Misy tranga tokony hisolosanao Hery mazoto amin'ny mpisolovava hanatanteraka ny fisavana. Raha izany no izy dia hampandre anao ny mpisolovava anao ary manoro anao ny fomba famoahana azy. Eto ianao dia mila mandamina ny vola rehetra mifandraika ary izany koa dia halamina tsirairay avy.
Ny valin'ny valiny - Misy ny fotoana tsy ananan'ireo manampahefana fampahafantarana ny mombamomba ny fanaovana lisitra noho ny antony fandriampahalemana. Miankina amin'ny toe-javatra manokanao ny vokam-panadinana ary tsy misy antoka izany.
Asa fanampiny - Ny serivisy ara-dalàna ivelan'ny fanaovana ny vaomiera voalaza etsy ambony dia mila fifanarahana hafa.
Antsoy na WhatsApp izahay amin'ny 971506531334 + 971558018669 + (mihatra ny saran'ny serivisy USD 400)